Ardor: Yakavhurwa Sosi Professional Audio Edhita | Linux Vakapindwa muropa
Ardor - Yakavhurika Sosi Professional Audio Edhiyo
Ardor iri multiplatform yedhijitari odhiyo yekushandira iyo iwe yaunogona kushandisa kune odhiyo uye MIDI multitrack kurekodha, odhiyo kurongedza uye kusanganisa. Ichi chirongwa open source, yakagoverwa pasi peGNU General Public License.
Parizvino inogona kuiswa paGNU / Linux, OS X, 1 FreeBSD2 uye Windows anoshanda masystem Mugadziri wayo mukuru ndiPaul Davis, Iye zvakare anoona nezve iyo JACK Audio Kubatanidza Kit chishandiso.
Ardor's mushandisi mushandisi weboka, pamwe nevaaishanda navo, zvakagadzirwa nevanyori, vaimbi uye mainjiniya ekurekodha.
Ndisati ndaenderera ndinofanira kusimbisa kuti iyo kushandisa Ardor mapakeji akagadzirira kuisar, ivo vanofanirwa kudhawunirodha kubva kune webhusaiti yeprojekiti uye inodikanwa kubhadhara kana dhora rimwe chete. Kuti isoftware yemahara hazvireve kuti mahara.
Imwe sarudzo ndeyekunyorera nekubhadhara 1, 4 kana gumi emadhora pamwedzi uye nekudaro vanopa nguva zhinji mukugadzirwa kwesoftware iyi. Iko kunakirwa kwekunyorera ndekwekuti zvigadziriso zvinogamuchirwa.
Pindai hunhu hukuru hweArdor tinahwo:
12, 24 kana 32 zvishoma kurekodha
Chero ipi nhamba yematanho epanyama
Tsigiro yemhando dzakasarudzika mafomati: wav, wav64, caf, aiff, ogg, MIDI, pakati pevamwe
Dzokorora patraki kana pasvondo
"Mono" uye "Stereo" rutsigiro odhiyo
LV2, Ladspa uye LinuxVST plug-in rutsigiro
VST plug-in inotsigira
External kudzora pamusoro rutsigiro
Tsigira kupinza mafaera evhidhiyo
Yakaomesesa nzira yekutsigira uchishandisa JACK
1 Maitiro ekuisa Ardor paLinux?
2 Maitiro ekunyora Ardor paLinux?
Maitiro ekuisa Ardor paLinux?
Mukati iyo yekuchengetera yekugovera isu tinogona kuwana iyo package yekushandisa yakagadzirira kuiswa, chete izvo iine ruzivo rwekuti inogona kunge isiri iyo yazvino vhezheni uye kunze kweizvozvo izvi chete vhezheni yekuyedza.
Izvozvo zvakati, Kana iwe uchida kuyedza iko kunyorera ndinokusiira iwo mirairo yekuisa.
Kuti uwane gadza Ardor paDebian, Ubuntu uye zvigadzirwa:
sudo apt install ardour
Kana iwe uri kushandisa Arch Linux kana chimwe chinobva iwe chaunogona kuisa iko kushanda nemurairo uyu:
sudo pacman -S ardour
Kana iri Fedora, CentOS uye zvigadzirwa tinogona kuisa ne:
sudo dnf install ardour
Pamusoro pemhosva yacho vhura:
sudo zypper install ardour
Uye neizvi iwe uchave nechishandiso chakaiswa pane yako system.
Zvino sezvataurwa iko kushanda kuri pachena saka isu tine mukana we kukwanisa kurodha rekodhi kodhi uye unganidza iyo kuisa iyo application.
Saka neizvi hatina zviyero zveshanduro kana kuti iri vhezheni yekuyedza.
Maitiro ekunyora Ardor paLinux?
Kutanga maitiro ekuvaka, ivo vachatanga kuda kuisa akawanda ekutsamira kwechirongwa. Ardor iguru redhiyo yekugadzirisa suite uye inoshandisa hombe nhamba yemakodhekisi uye zvimwe zvishandiso. Kuisa zvinoenderana, unofanirwa kuenda ku zviri pamutemo webhusaiti, verenga zvinyorwa uye ziva zvavari.
Waita zviri pamusoro isu tinopfuurira kutora kodhi yekodhi, isu tinovhura terminal uye tigoita:
git clone git: //git.ardour.org/ardour/ardour.git
Ipapo ivo vanofanirwa kuendesa iyo script "waf".
Tichada kutanga tamhanya kuongorora iyo system kuti igadzire nyowani mafaira ekumisikidza (makefiles, nezvimwewo).
Kumhanyisa waef script kuchavabatsirawo kuti vaone kana vaine zvese zvinoenderana zvinoiswa.
Iyo script inoramba kumisikidza isina aya mafaera, saka, kana uine matambudziko kuti uzviwane, kutanga tichaita uyu murairo:
Izvi zvichaona kuti kutsamira kwakaiswa uye zvese zvakagadzirira kuenda. Kutanga maitiro ekuvaka, mhanya wow:
Ardor's odhiyo yekugadzirisa package yakakura kwazvo uye zvinotora nguva yakareba kuti zviitwe. Saka panguva ino ivo vanogona kutora mukana kuita zvimwe zvinhu.
Akagadzira kuunganidzwa, ikozvino isu tichachinja dhairekitori uye tinozviita na:
Kutanga Ardor ne "ardev."
Panguva ino isu tatova nemukana wekuisa iko kunyorera, isu tinongofanirwa kuita chete:
Uye ndizvozvo, iwe unogona kutanga kunakidzwa neiyi nyanzvi nyanzvi odhiyo edhisheni
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Ardor - Yakavhurika Sosi Professional Audio Edhiyo
Microsoft inoita kunge iri kurwisa makwikwi kuburikidza nemvumo
Maitiro ekuisa Java paUbuntu 18.04 uye yakatorwa migove